Adobe Acrobat Pro ကို DC က 2018 အပြည့်အဝ Crack Plus အား Serial Key ကို [နောက်ဆုံး]
နေအိမ် » ရိုက်သံ & active » Adobe Acrobat Pro ကို DC က Crack 2018
Adobe Acrobat Pro ကို DC က Crack အရေးကြီးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာရွက်စာတမ်းများလုပ်ဆောင်နေနှင့်ကိုင်တွယ်၏လမ်းကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟု Adobe ကစာရွက်စာတမ်းတိမ်တိုက်နှင့်အတူသစ်တစ်ခုဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်. ဒီဗားရှင်းအသုံးပြုသူများအမှုကြောင့်မိုဃ်းတိမ်အင်္ဂါရပ်မှလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူဘယ်နေရာမှာမဆိုထိုင်လျက်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်. ထို့အပြင်, ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူများကိုဖန်တီးနိုင်သည့်၏အကူအညီနှင့်အတူသစ်ကို Acrobat, DC မိုဘိုင်း app ရှိပါတယ်, ပြင်ဆင်ရန်, နှင့် PDF များလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့်လည်း desktop ပေါ်ကဖြတ်ပြီးမကြာသေးမီ file ကိုဝင်ရောက်ဖို့မိုဘိုင်း Link ကိုသုံးနိုငျ, ဝဘ်, နှင့်မိုဘိုင်း. Adobe Acrobat Pro ကို DC က keygen ကိုသင်ချက်ချင်း PDF များကိုတည်းဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်နှင့်အသစ် OCR နည်းပညာမှသဘာဝကျကျစာရွက်စာတမ်းများ scan ဖတ်ကျေးဇူးတင်စကား. နင်ကြိုက်ကောင်းကြိုက်လိမ့်မယ် Adobe က Photoshop ကို CC ကို 2018 ရိုက်သံ.
တစ်ဦးပြည့်စုံနှင့်အတူ, built-in က e-လက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှုကို Adobe Acrobat Pro ကို DC က keygen သင်ပို့ပါစေနိုင်ပါတယ်, လမ်း, စီမံခန့်ခွဲ, နှင့်စတိုးဆိုင်စာရွက်စာတမ်းများလက်မှတ်ရေးထိုး.
အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းများလည်း built-in ပါဝင်သည် PDF ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့်လမ်းကြောင်းဟာအသုံးပြုသူများအတွက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပိုမိုအဆင်ပြေစေသည်ထားတဲ့ကူးယူခြင်းမှအခြားသူများအားတားဆီးသို့မဟုတ် PDFs.Adobe ရဲ့စာရွက်စာတမ်းတိမ်တိုက်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်ကိုတည်းဖြတ်ခြင်းဖြင့်ကာကွယ်နိုင်ပါသည်.
Download Adobe Acrobat Pro ကို DC က Crack တစ်ခုထိရောက်ရှိပါတယ်, အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေအသစ်က interface နဲ့ OCR နှင့်စာသား-တည်းဖြတ်ရေးအတွက်အချို့သိသိသာသာတိုးတက်မှုများ. အသုံးပြုသူများနှင့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဖို့အတှကျဒါဟာ tools တွေကိုထပ်ရှိပါတယ်. ဒါဟာ features အသစ်များများရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့ဒီဗားရှင်းအတွက်အဓိကအပြောင်းအလဲက၎င်း၏အသစ်ကအင်တာဖေ့စဖြစ်ပါသည်.
အခုတော့ကအသုံးပြုသူသူသုံးစွဲဖို့လိုလားသော tool ကို၏အမည်ကိုအနည်းငယ်အက္ခရာများရိုက်ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ရှာရန် Tools များ box ကိုလည်းပါဝင်သည်, နှင့် tool ကိုပြီးတော့ပြတင်းပေါက်၏ညာဘက်မှာ panel ကိုထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်. Tools များအခြမ်း panel က ဖြစ် ကစိတ်ကြိုက် SY, အဆိုပါဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်, ပြတင်းပေါက်၏အပေါ်ဆုံးမှာခေတ်သစ်ရှာဖွေနေ toolbar ကို. အမေဇုံသို့မဟုတ်အခြား touch-enabled ကို Windows တက်ဘလက်အပေါ်အသုံးပြုတဲ့အခါ, အဆိုပါ interface ကိုအပြည့်အဝ touch-enabled ဖြစ်ပါသည်.
အခမဲ့ Acrobat Pro ကို DC က Crack 2017 တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းမဆိုကွန်ပျူတာတစ်ခုသို့မဟုတ် Scan ပုံရိပ်ပေါ်မတည်ရှိပါဘူးဟောင်းပူ-သတ္တု font ကိုပုံနှိပ်စာအုပ်၏ format နဲ့ပင်လျှင်တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းရဲ့မူလဖောင်အတွက်စာသားမ add သို့မဟုတ်တည်းဖြတ်နိုင်သည်.
အဘယ်သူမျှမကအခြား optical-ဇာတ်ကောင်-စာဖတ်ခြင်း software ကိုထိုကဲ့သို့သောထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များ. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝအသစ်သောနည်းလမ်းဟောင်းကိုပုံနှိပ်စာသားကို repurpose ခွင့်ပြု. text-တည်းဖြတ်ရေး bulleted နှင့်ရေတွက်စာရင်းပစ္စည်းများထည့်သွင်းဖို့စွမ်းရည်များပါဝင်သည်. Acrobat Pro ကို DC က, ၎င်း၏မြန်နှုန်းနှင့်အတူ, ပြောင်မြောက်, နှင့်ကဆက်ပြောသည်အင်အားကြီး, အကောင်းဆုံးကိုသေး Acrobat နှင့်၎င်း၏ဒိုမိန်း၏မာစတာဖြစ်ပါသည်.
Adobe Acrobat Pro ကို DC ကအင်္ဂါရပ်များ
စာရွက်စာတမ်းမိုဃ်းတိမ်ကို generate မှနိုင်စွမ်းရှိသည်
အသုံးပြုသူရဲ့အဆင်ပြေနယူး Acrobat, DC မိုဘိုင်း application ကို.
တစ်ဦး toolbar ကိုအတူစကားလုံးများကို detect လုပ်ဖို့ OCR အဆင့်မြှင့်.
အလိုလိုနှင့်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ interface ကို
Touch-enabled ကို interface နှင့်အတူ tools များ၏တစ်ဦးကကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်း.
Adobe Acrobat Pro ကို Crack လုပ်နည်း?
Adobe Acrobat Pro ကို DC က Crack Serial number ကိုစာရင်းနှင့်အတူ Download.
အခုတော့သူ့ရဲ့ .exe ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဗန်းကနေ exit.
ဒေါင်းလုဒ်ဖိုင်တွဲကနေ Adobe က .dll ဖိုင် / amtlib.dll ကော်ပီကူးခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း directory ထဲတွင်အစားထိုးရန်.
သင်ဒီမှာတပ်ဆင် directory ကိုရှာတှေ့နိုငျ. [ ကို C:\_Program Files (x86)\_Adobe က Acrobat, DC Acrobat ]
Adobe Acrobat Pro ကို DC က Crack Download 2018
Adobe Acrobat Pro ကို DC က 2018
Adobe Acrobat Pro DC has an efficient, အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေအသစ်က interface နဲ့ OCR နှင့်စာသား-တည်းဖြတ်ရေးအတွက်အချို့သိသိသာသာတိုးတက်မှုများ. အသုံးပြုသူများနှင့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဖို့အတှကျဒါဟာ tools တွေကိုထပ်ရှိပါတယ်. ဒါဟာ features အသစ်များများရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့ဒီဗားရှင်းအတွက်အဓိကအပြောင်းအလဲက၎င်း၏အသစ်ကအင်တာဖေ့စဖြစ်ပါသည်.
← Malwarebytes Anti-Malware 3.3.1.2183 ရိုက်သံ avast SecureLine Vpn လိုင်စင် 2018 →